Twitter megharia ihu ya maka gam akporo, iOS na web | Gam akporosis
O yiri ka netwọk mmekọrịta nke nnụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-agabiga n'oge na-adịbeghị anya ụdị nsogbu dị adị nke na-eduga ya iwebata ọtụtụ mgbanwe dịgasị iche. Anyị anaghị ekwu maka naanị mgbanwe metụtara ọrụ nke ọrụ ahụ n'onwe ya, kamakwa mgbanwe na nhazi nke interface ya, mgbanwe dị mma, na enweela ole na ole.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke Twitter na nsụgharị ya maka gam akporo, iOS, web, Twitter Lite na ọbụna TweetDeck, ị na-achọ ịbanye n'ime ihe ịtụnanya na nke ahụ bụ na otu netwọkụ mmekọrịta ekwuputala ọkwa ọhụụ nke ga-emetụta ụdị niile a ga-ebido nke ahụ kesaa n’oge na izu na-esote.
Maka oge a, anyị nwere ike kwenye na ọ ga-abụ mgbanwe "mgbanwe" pụtara. Iji malite, ngwa Twitter niile ga-ahapụ otu ihe odide ọhụrụ nụchara anụcha karị ma jiri aha ndị ama ama, na-enye elele anya na nsụgharị niile. Na mgbakwunye, na mmeghari ohuru a ga-abia mechie foto profaịlụ.
Twitter ga-etinye ihe kensinammuo ihe oyiyi na ngwa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-apụta na ọtụtụ ndị chere na akara ngosi azịza, nke bụ akụ na-atụgharị n'aka ekpe, pụtara ihichapụ ma ọ bụ na ọ ga-eweghachite ha na peeji gara aga. Akara azịza a ga-agbanwe ka ọ bụrụ "okwu afụ".
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-ejikwa Twitter site na ngwaọrụ iOS, ma n'ezie ọtụtụ n'ime gị na-eme (ndo, anyị na-eme), ị kwesịrị ịma na ị ga-emesị nweta ụfọdụ mmelite nke ndị ọrụ gam akporo enwegoro kemgbe afọ gara aga , otu esi egosi profaịlụ, akaụntụ ndị ọzọ, ntọala na nhọrọ nzuzo na otu menu dị mfe ịnweta, nke ngwa a ga-enwe ọdịdị dị n'usoro karịa. Ọzọkwa, njikọ na isiokwu na weebụsaịtị ga-emeghe na ndị na-ekiri Safari na-ahapụghị ngwa ahụ, nke ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịbanye saịtị ebe ijikọrịrị.
N'ikpeazụ, ma na mbipute ya maka gam akporo na iOS na TweetDeck, a ga-emelite tweets n'otu ntabi anya site na nzaghachi, retweet na ihe ndị yiri ya, na-enye gị ohere ịhụ mkparịta ụka ka ha na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Twitter megharia interface ya maka gam akporo, iOS na web
Samsung Galaxy Note 8 "Emperor Edition" ga-enwe 8GB Ram